OROMOO BARAARUUF WAYYAANEE GAGGABSUUN BARBAACHISAADHA | robemedia
Home AfaanOromo OROMOO BARAARUUF WAYYAANEE GAGGABSUUN BARBAACHISAADHA
( Sirritti dubbisaa waliif dabarsaa)
Duula ajjeechaa kanarraa saba keenya baraaruu fi qabsoon mirga abbaa biyyummaa injifannoon akka goolabamtuuf tooftaalee qabsoo babal’isaa sirna abbaa hirree kana hudhuun murteessaa dha. Kunis fincila marsaa 3ffaa keessatti hojirraa ooluu eegalee jira. Akeekni ijoon tooftaa kanaa qabsoon Oromoo duula mirga ofii gaafachuutirraa gara tarkaanfii mirga ofii deeffachuutti ceesisuudha. Haaluma kanaan tooftaaleen armaan gadii kun amma booda bal’inaan hojitti yoo hiikkaman sirna kana hafuura itti kutuun takkaa akka harka kennee mariif gadi taa’u, yookaanii gaggabee akka lafa dhahu taasisu.
3) Daandii Cufuun bu’aa guddaa buusee jira. Tarkaanfiin kun tooftaalee sirnicha akka malee wareersuun waan qabatu wallaalchisee bu’aa guddaa buusan keessaa tokko. Tarkaanfiin daandii bakka hundatti cufuu kun akkuma jirutti ta’ee daandiilee gurguddoo sochii Agaazii fi diinagdee Wayyaaneef barbaachisoo ta’an cufuun yeroo dheeraaf adda kutuun faayidaa guddaa qaba. Faayidaa: Sochii Agaazii saffisaan bakkaa bakkatti geessuu hanqisa. Akkasumas sochii geejjibaa laaffisuun humna diinagdee sirnichaa laamshessaa deema. Hojiin daandiiwwan cufuu kun bifa gurmaa’aa fi qindaa’aa ta’een yeroo halkanii halkanii duulaan yoo raawwatame qabsoo guyyaa itti aanuuf fayidaa guddaa qaba. Yeroo halkanii daandiiwwan cufuun immoo lukkeeleen wayyaanee eenyu akka cufe akka hin beekne waan godhuuf gaaga’ama qabsaa’ota irra gahus hedduun xiqqeessa.
6) Barnoonni Bilisummaan Booda: Akkuma beekamu ji’oota sadan dabraniif barnoonni sirnaan Oromiyaa keessa hin turre. Mootummaan kun barsiiftota 60 ol ajjeessee, kuma lamaa ol mana hidhaa keessatti hiraarsaa jira. Barattoota dabtaraa fi qalama qofaa of harkaa qabanitti dhukaasa banuun hedduun fuuldura barattootaatti wayita galaafatu, hedduun dhiigni isaanii dhangala’eeti jira. Barattoonni 20,000 ol mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiru. Manneen barnootaa Oromiyaa buufata waraanaa waan ta’aniif tasgabbiin barachuun hin danda’amne. Kanaafuu haala kana keessatti baranneet wayitti baanaan hin yaadamu. Fakkeenyaaf warreen qormaata biyyaalessaa qorataman bifuma kamiinuu barattoota naannolee biroo bifa tasgabbaa’een waggaa guutuu barataa turan waliin dorgomanii gara barnoota ol’aanaatti ce’u jedhanii yaaduun gonkumaa hin danda’amu. Barattoonni Oromoo barana qormaata biyyaalessaa tasa fudhachuun irra hin jiraatu. Kanaaf barnoonni Oromiyaa keessa bilisummaan booda ta’uu qaba mariin jedhu baldhinaan godhamaa turuun ni yaadatama. Kanarratti amma namuu waliif galee jira. Garuu tooftaa kana barattoonni mana barnootaa irraa hafuun osoo hin taane manneen barnootaatti argamuun kan amma duraa caalaa daran dirree qabsoo bilisummaa Oromoo gochuutu nu baasa. Kanarraa ka’uun Wiixata dhufu irraa eegalee barattoonni hundi manneen barnootaa banaa jiranii fi kan cufaman dabalatee yunifooormii isaanii sirnaan uffatanii dhaquutu irra jiraata. Barsiisonnis hojii idilee isaanitti deebi’u. Garuu adeemsa baruu fi barsiisuu osoo hin taane tooftaalee diddaa garaagaraatiin guyyaan dabra. Bakka qeerroo fi qonnaan bulaan hiriira qopheessanitti gurmuun itti dabalamuun, bakka haalli akkasii hin mijoofnetti taa’umsaan, seenaa barreessuun, waliif dubbisuun, warra miidhameef kadhannaa gochuun, faaruu qabsoo Oromoo farsuun kkf dabra.
Dhumaratti ilmaan Oromoo milishaa, poolisii fi loltuu ta’anii sirnicha tajaajilaa jiran hamma ammatti obsaan turuun keessan nama boonsa. Ammasyeroon tarkaanfii dhihaachaa jirti. Miidhaan lammii keessanirra gahu garaa isin gubee dhuunfaan tarkaanfiitti seenun dogongora tarsiimooti. Tarkaanfin fudhatamuu bifuma karooraatin karaa qindaawaa ta’een gamtaan raaw’atamuu feesisa. Amma qophiin lojistikii, qorannoo fi karooraa (research and planning) saffisaan goolabamuu qaba. Mootummattiin saffisa yaadameen olitti diigamaa waan jirtuuf hojiin qophii bifamu saniis saffisaan goolabamee gara tarkaanfii seenamuu baannaan gaaga’ama hamaatu uumamuu mala. Amma gara tarkaanfii karoorfameetti deemamutti gaaga’ama uummata Oromoo mormiif dirreetti bahu irra gahu xiqqeessuuf toftaalee garaagaraa bilchinaan fayyadamaa.
Previous articleResistance against TPLF fascism Gidda Biqiri , Boji Choqorsa Distric, West Walaga March 3, 2016
Next articleWho are the sponsor Mimi Sibehatu’s Zami FM? Oromo enemy
This Month: 47783